Isbaheysi mucaarid ku ah maamulka Axmed Madoobe oo lagu dhowaaqay… – Hagaag.com
Isbaheysi mucaarid ku ah maamulka Axmed Madoobe oo lagu dhowaaqay…
Isbaheysi mucaarad ku ah Maamulka Axmed Madoobe ayaa looga dhawaaqay magaalada Muqdisho, Isbaheysigan ayaa la magac baxay Dib u soo nooleynta Dimoqraadiyadda Jubbaland, waxaa horboodaya C/llaahi Ciilmooge Xirsi oo horay u soo noqday Wasiirkii Warfaafinta Xukuumaddii hore.
Kulan loogaga dhowaaqayay isbahaysigan ayaa waxaa ka dhex muuqday siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbaland kuwaasoo ku eedeeyay madaxweynaha Jubbaland inuusan ka shaqeyneyn horumarka dowlad goboleedkaas.
Ku dhowaaqista isbahaysigan ayaa ku soo beegmay saacado kadib markii warbaahinta uu ka soo muuqday Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo uu dhinac taagan yahay Cabdikariin Qalbidhagax oo ay hore dowlada federalka ugu gacan gelisay dowlada Ethiopia.
Dadka u dhuun daloola arrimaha siyaasada ayaa aaminsan in isbahaysigan uu yahay mid ay gadaal ka riiixeyso dowlada Federalka oo xiriirka kala dhexeeya maamulka Jubbaland aysan isku wanaagsanayn.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada oo booqday wadanka Isutagga Imaaraatka Carabta waxaana jira shaki ah in Axmed Madoobe uu heshiis la galay dowlada Imaaraatka.
Sidoo kale dowlada Federalka ayaan jecleysan booqashada uu Madaxweynaha Jubba uu ku tegey dalka Ethiopia iyadoo aysan weli madaxda dalka la kulmin Ra’iisal wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia.